Pregorexia, tahotra ny hahazo lanja mandritra ny fitondrana vohoka | Bezzia
Tony Torres | 11/01/2022 23:55 | bevohoka
Betsaka ny tahotra mety hipoitra manodidina ny fitondrana vohoka, indrindra rehefa sambany. Ny zava-drehetra tsy fantatra dia miteraka ahiahy, satria ny tsy fahazoana antoka ny miteraka adin-tsaina be ny tsy fahafantarana izay hitranga. Ho an'ny vehivavy sasany, mampientam-po ny fiatrehana ny fiovana rehetra amin'ny fitondrana vohoka, fa ho an'ny maro hafa, tahotra lehibe izany.
Ny tahotra ny hahazo lanja mandritra ny fitondrana vohoka misy, dia manana toetra ankapobeny sy ny anarana manokana, pregorexia manokana. Ity aretina ity, na dia tsy tafiditra ao amin'ny Boky Torolàlana momba ny aretina ara-tsaina toy ny aretina hafa aza toy ny anorexia na bulimia, dia zava-misy ary fantatra amin'ny hoe anorexia ny vehivavy bevohoka.
1 Inona no atao hoe pregorexia?
1.1 Ny soritr'aretin'ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny vehivavy bevohoka
1.2 Ny loza ateraky ny pregorexia ho an'ny reny sy ny zaza
Inona no atao hoe pregorexia?
Ny pregorexia dia aretina misakafo izay mitranga mandritra ny fitondrana vohoka. Ny tena toetra mampiavaka ity aretina ity dia ny tahotra ny hahazo lanja mijaly ny ho avy reny. Olana mety hampidi-doza ny fahasalaman'ny reny sy ny foetus. Mizara toetra amin'ny aretina hafa mitovy amin'izany ity fikorontanan-tsakafo ity. ny bevohoka manao fanatanjahan-tena tafahoatra, manara-maso ny fihinanana kaloria, ankoatra ny fihinanana be loatra sy ny fanadiovana manaraka.
Ity aretina ity dia mety hitranga amin'ny vehivavy izay tsy niharan'ny olana amin'ny sakafo teo aloha. Na izany aza, matetika dia mitranga amin'ny vehivavy efa niaina taloha na niaina tamin'ny fikorontanan'ny sakafo, toy ny anorexia na bulimia. Na izany aza, ny nijaly tamin'ity olana ity taloha dia tsy manome antoka izany dia mety hivoatra amin'ny fomba mitovy amin'ny fitondrana vohoka.
Ny soritr'aretin'ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny vehivavy bevohoka
Ny vehivavy rehetra dia tsy mahatsapa fiovana eo amin'ny vatany amin'ny fomba mitovy, na dia ny mahazatra aza dia raisina ho voajanahary izy ireo ary mieritreritra fa noho ny fisian'ny fiainam-baovao mitombo ao anatinao. Ho an'ny vehivavy sasany, ny fahitana ny fitomboan'ny kibo dia mampihetsi-po, fa ho an'ny hafa, tsy dia mampihetsi-po loatra izany raha tsy miteraka olana. Na izany aza, rehefa manana fiaviana ara-tsaina ny tahotra ny hahazo lanja, mety hipoitra ireo soritr'aretina mifandray amin'ny pregorexia ireo.
Ny bevohoka aza miresaka momba ny fitondrana vohoka na manao izany amin'ny fomba tsy marina, toy ny hoe tsy niaraka taminy.
Fadio ny misakafo eo imason'olona, aleony mihinan-kanina.
Manana obsession amin'ny manisa kaloria.
Manao fanatanjahan-tena tsy ara-dalàna ianao, be loatra, tsy misy fiheverana ny mahazatra soritr`aretina ny fitondrana vohoka.
Mety handoa izy ireo, na dia hiezaka hanao izany mitokana aza.
Amin`ny lafiny ara-batana, dia mora ny mahita fa ny vehivavy tsy mahazo lanja mahazatra amin`ny fitondrana vohoka.
Mety tsy ho voamarika ireo soritr'aretina ireo raha tsy miara-mipetraka akaiky amin'ilay vehivavy bevohoka ianao. Fa na izany aza, miharihary kokoa amin'ny fitondrana vohokaRehefa mitombo be ny vavony dia mivelatra ho azy koa ny tongotra, ny sandry, ny tarehy na ny andilany noho ny fitondrana vohoka. Na dia tsy mitovy aza ireo fiovana ireo amin'ny vehivavy rehetra, dia tena miharihary izany rehefa tsy mitranga ara-dalàna.
Ny loza ateraky ny pregorexia ho an'ny reny sy ny zaza
Ny loza ateraky ny fikorontanan'ny sakafo eo amin'ny fitondrana vohoka dia mety ho maro, ho an'ny reny sy ny zaza. Voalohany, tsy mahazo ny otrikaina ilainy mba hivoatra ara-dalàna ny foetus. Baby afaka teraka tsy ampy lanja, olana sempotra, fiterahana aloha loatra, tsy fahatomombanana na fikorontanan'ny neurolojia amin'ny fahasarotana samihafa, ankoatra ny hafa.
Ho an'ny reny, ny pregorexia dia mety hiteraka olana goavana toy ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampian-tsakafo, ny arrhythmias, ny fahapotehan'ny volo, ny bradycardia, ny tsy fahampian'ny mineraly, ny décalcification ny taolana, sns. Ary tsy mandritra ny fitondrana vohoka ihany, ny olana ara-pahasalamana dia mety hisy fiantraikany aminao mandritra ny fotoana maharitra. Ankoatra ny rehetra olana ara-pahasalamana izay tafiditra amin'izany fikorontanana izany.
Noho izany, raha mieritreritra ianao fa voan'ny pregorexia amin'ny fitondrana vohoka, Tena zava-dehibe ny mamela ny tenanao hokarakaraina sy mametraka ny tenanao eo an-tanan'ny matihanina. Ho an'ny fiarovana anao sy ny fahasalaman'ny zanakao ho avy, satria afaka miverina amin'ny lanjany ianao any aoriana, fa raha misy olana amin'ny fivoarany dia tsy hanana fahafahana hiverina intsony ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » bevohoka » Pregorexia, tahotra ny hahazo lanja mandritra ny fitondrana vohoka
Erotophobia na tahotra ny hanao firaisana amin'ny mpiara-miasa